आगमन साहित्य : दुनियाँमा सबैभन्दा बढी चर्चाको बिषयमा आएको कुरा 'प्रेम' के हो ?
दुनियाँमा सबैभन्दा बढी चर्चाको बिषयमा आएको केही कुरा छ भने त्यो हो ‘ प्रेम ‘ ।
साहित्यको धेरै भन्दा धेरै बिधाहरु, कुनै पनि उपन्यास होस या कुनै चलचित्रहरु होस यिनिहरुको केही न केही अंश प्रेम सङ्ग नै जोडिएको हुन्छ। प्रेमकथा नजोडिएको उपन्यास, प्रेमकथा नजोडिएको चलचित्र अर्थात अन्य कुनै पनि चिजहरु नुन नभएको तरकारी जस्तै खल्लो लाग्न सक्छ।
आजको बिश्वमा प्रेमसम्बन्धी खुलदुली नभएको मानिस प्रायः कमै होलान अर्थात प्रेमसम्बन्धी जिज्ञासा उत्सुकता नभएको मान्छे को पो होला र ? बिश्वका ठुलाठुला साहित्यकारहरु, दार्शनिकहरु कबिहरु हुदाहुदै बैज्ञानिक हरुसमेत प्रेम के हो भनेर जान्न तथा उत्तर खोज्नको लागि लागि परेका छन। तर अहिलेसम्म पनि यसको चित्तबुझ्दो उत्तर नपाएको अवस्था छ।
सबै बिषयमा प्रेमको उपस्थिती भएको, सबैभन्दा बढी चर्चाको बिषयमा पनि ‘प्रेम’ नै रहेको साच्चै नै प्रेम भनेको के हो त । आउनुस यसको बारेमा खुलेर कुरा गरौ।
बिश्वमा सात अरब भन्दा बढी मानिसहरु छन, प्रेमको परिभाषा पनि सात अरब भन्दा बढी नै निस्किन्छ, भन्नुको मतलब प्रेम भनेको यस्तो चिज हो जसको परिभाषा हरेक व्यक्तिपिच्छे नै फरक हुन जान्छ।
प्रेम भनेको हामी सबैको लागि प्रीय र प्यारो शब्द हो। जो कोहिलाई पनि ‘ प्रेम ‘ शब्द सुन्नेबित्तिकै आनन्द लागेर आउन सक्छ। प्रेम एक अदभूत अनुभव हो , प्रेम एक भावनात्मक सम्बन्ध पनि हो । प्रेमको बिषयमा बहस गर्दाखेरी भिन्न प्रकारका सोच बिचार भएका मानिसहरुले विभिन्न तरिकाले बुझ्ने गर्दछन। आखिर बहस नै गर्ने हो भने प्रेम के हो त ? के दुई प्रेम र प्रेमिकाबिचको अन्तरसम्बन्ध भनेको प्रेम हो ? अर्थात के प्रेम दुई बिपरित लिङ्गी बिपरित हुने आकर्षण तथा अन्तरसम्बन्ध मा मात्र सिमित छ कि अरु बाह्य कुरामा पनि ? यो खुलेर बहस गर्नुपर्ने बिषय हो।
अधिकांश मानिसहरुको ‘ प्रेम ‘ शब्द सुन्नेबित्तिकै दिमागमा पानपाते आकारको चिजले उपस्थिती जनाईहाल्छ होला , हो यो सबैमा आउनु स्वभाबिक नै होला तर जब कुनै पनि महिला पुरुषको प्रेममा अर्थात कुनै पुरुष महिलाको प्रेममा परेकी हुन्छे तब मायाको जादु मायाको एक्सन मुटुमा होइन दिमागमा आउनुपर्ने हो । हुन त त्यो भनेको प्रेमको गराई र प्रेमको गहिराईमा भर पर्ने कुरा हो।
प्रेम के हो के होईन ?
प्रेमको सम्बन्ध विचार, व्यवहार उद्धेश्य र सभ्य कर्मप्रती मात्रै होईन उपयुक्त र उच्च नैतिक आचरण एवम् यौनजन्य व्य्वहारसङ्ग समेत गहिरो अन्तरसम्बन्ध रहेको छ। तर अर्को कुरा के छ भने प्रेमलाई कहिल्यै पनि कार्यशक्ती सङ्ग मात्रै जोड्न पनि मिल्दैन। दुई विपरित लिङ्गिप्रती हुने चुम्बन , आलिङ्गन सेक्स र स्पर्श आदिमात्रै पनि प्रेम होइन।
प्रेमको प्रभावलाई कसरी बुझ्न सकिन्छ ?
प्रेमलाई बुझ्ने विभिन्न किसिमका छुट्टै छुट्टै आइडियाहरु हुन सक्छन। प्रेमलाई सकरात्मक तथा नकारात्मक दुबै किसिमको दृष्टिकोणबाट वर्णन गर्न पनि सकिन्छ ।प्रयोग गर्न तथा बुझ्न जान्यो भने प्रेम जिवनको एउटा गुरु पनि हो जसले धेरैभन्दा धेरै जिवनको पाठ सिकाउछ, जसले चाहिने व्यवहारहरु सिकाउछ, जसले राम्रो काम गर्न प्रेरित गराउछ । प्रेम एउटा राम्रो कला पनि हो ।
के प्रेममा स्वार्थ हुन्छ ?
यो अलि कन्फ्युजन खालको प्रश्न पनि हो । प्रेम भनेको एउटा भावनात्मक सम्बन्ध मात्रै नभएर छुट्टै खालको अदभूत शक्ति पनि हो भनेर माथी उल्लेख गरिसकिएको छ। प्रेममा स्वार्थको कस्तो खालको पोजिसन हुन्छ भन्ने कुरा प्रेमको परिभाषामा भर पर्ने कुरा हो । हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो , बिश्वमा जो कोहि मान्छेले जे केही गरे पनि उसले केही न केही प्राप्तिकै लागि गर्ने गर्दछ अर्थात आफुले केही गरेबापत त्यसको केही फाइदा पाउने स्वार्थमा कामलाई अगाढी बढाएको हुन्छ। उदारहरणको लागि एउटा किसानले आफ्नो गोठमा पालेका गाईबस्तु तथा अन्य जनावर हरुलाई औधी माया गरेर राखेको हुन्छ, किनभने समय बित्दै गएपछी त्यस किसानले जनावरहरु बेचेर पैसा कमाई धनी बन्ने स्वार्थ बुनेको हुन्छ। कुनै दम्पतिले आफ्नो बच्चाहरुलाई जन्माउने देखि लिएर पालनपोषण शिक्षादिक्षा , स्याहारसुसार गरेर अर्थात उसलाई चाहिने सबै खालको आवश्यकताहरु परिपुर्ती गरिदिएर अगाढी बढाएका हुन्छन , छोराछोरिहरुले भोलि भबिष्यमा आफ्नो लागि केही गर्देलान, आफुलाई पाल्छन होला भन्ने आश दम्पतिमा पलाएको हुन्छ । हो स्वार्थ यहि नै हो । भन्नुको मतलब जसले जसलाई जे गरे पनि स्वार्थ भन्ने कुरा अटोमेटिक आउने कुरा हो । ठ्याक्कै त्यस्तै दुई प्रेम र प्रेमिबिच हुने सम्बन्ध पनि त्यस्तै हो, जसमा स्वार्थको ठुलो खाडल रहेको हुन्छ। स्वार्थ के कति हुन्छ भन्ने कुरा मात्र प्रेमको परिभाषाले बताउने हो तसर्थ सबै कुराको ईपिसोडलाई मिलाएर बुझ्दाखेरी स्वार्थबिनाको प्रेम हुन्छ भन्नु एक भ्रम मात्र हो । वास्तविक जिवनमा स्वार्थ बिनाको प्रेम असम्भव हुन्छ।
कतिको प्रेमपछी सम्बन्ध छुट्ने पनि हुन्छ यसलाई कसरी लिने ?
हो प्रेममा छुट्ने जसलाई ‘ ब्रेकअप ‘ पनि भनिन्छ कसैको न कसैको प्रेममा ब्रेकअप भैरहेको हुन्छ। यो हुनुको पछाडी धेरै कारणहरु भेट्न सकिन्छ जस्तै: प्रेम र प्रेमिका बिच बिश्वास कम हुनु, दुई अन्तरजातिय मानिस बिच प्रेम हुनु, एउटाको बानी अर्कोलाई मन नपर्नु , प्रेमी तथा प्रेमिकालाई उचित समय दिन नसक्नु आदि प्रेम टुट्ने केही उदाहरण हरु हुन। जसको प्रत्यक्ष असर दुबैमा परेको हुन्छ। आजभोली प्रेम सम्बन्ध छुटेकै कारणले गर्दा पनि कतिपय आत्महत्या र डिप्रेसनको समस्या कतिपयमा देखिन लागेको छ । यो प्रेमको साईड इफेक्ट भित्र पर्दछ।
प्रेमको बारेमा जतिसुकै लेखे पनि यो कहिल्यै सकिँदैन। कहिल्यै पनि यसको वर्णन गरेर भ्याईदैन, र अर्को कुरा भनेको प्रेमसम्बन्धी लेख्नलाई कसैको न कसैको प्रेममा पर्नैपर्छ भन्ने पनि होइन। यसको वर्णन जोकोही पनि गर्न सक्छ।
नेगेटिभ नै देखिए पनि मैले हाललाई आफूलाई आइसोलेट गरेकी छु: केकी अधिकारि
धरहराको २२ तलामाथि राखियो गजुर
वर्षा र सहकालका देवता सेतो मच्छेन्द्रनाथको रथयात्रा शुरु(फोटो फिचर)
स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पालना गर्दै सेतो मच्छेन्द्रनाथको रथयात्रा शुरु
जीवनशैली, मनोरञ्जन, सम -सामयिक
दृष्टिविहीन केसीको साहस सगरमाथा आरोहणको इतिहास रच्ने प्रयास
पर्यटन, मनोरञ्जन, सम -सामयिक
ऐतिहासिक धरहरा टावरको पुनःनिर्माण कार्य अन्तिम चरणमा, वैशाख ११ गते उद्घाटन
धार्मिक, मनोरञ्जन, सम -सामयिक
उत्साहसाथ मनाइयो नयाँ वर्ष २०७८, पशुपतिनाथमा पाँच लाख बढी दर्शनार्थी
काभ्रेली चेली शर्मिलाले छैटौं पटक हिमाल आरोहण गर्दै